မေလ ၇ ရက် ၂၀၁၅ မေ ၁ - ၆ ရက်နေ့ အထိ ၀ ပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေးပါတီ ကမကထပြု၊ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နဲ့ မိုင်းလားတပ်မတော်တို့ ကူညီ ပံ့ပိုးမှု နဲ့ ရှမ်းပြည်...
UWSA နှင့် NDAA မှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရရှိထားပြီး အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စယူခဲ့သည့် ၁၉၈၉ မှ စ၍ တိုက်ပွဲပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ဒေ...
No charges for Oregon teacher accused of using Tesla coil to brand students with 'I love mom'
General election 2015 live: Latest updates as the UK goes to the polls
After six weeks of political campaigning, the future of Britain is in your hands. Follow all the latest news as millions of Brits cast their votes
Chuck Norris vs Special Forces in Texas: Action star urges citizens to be vigilant as he reveals huge multi-state military operation by US troops will take place on his 'ranch's backdoor'
The 75-year-old spoke out against the multi-state operation, which will take place on the 'back door' of his ranch, as the Pentagon denied it was planning ...
Messi shines as Barca beat Bayern
The Lokayukta police have filed an FIR against arch-rivals BJP leader BS Yeddyurappa and JD(S) leader HD Kumaraswamy accusing them of collusion inadenoti...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည့် ပါတီဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသော နေအိမ်ကိစ္စကို နေတိုးရှင်းလင်း
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပျံ့နှံ့နေ သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်ထားသော အိမ်သည် မာန် အောင်မြို့ရှိ ၎င်း၏အိမ်ဖြစ်သော် လည်း ယင်းအိမ်တွင် ၎င်းအပါ အဝင် မိသားစုဝင်များ...
Wonkblog: How Baltimore and cities like it hold back poor black children as they grow up
Before Harvard economists Raj Chetty and Nathaniel Hendren released their groundbreaking new research this week on the role that geography plays in shaping...
Pyay Ti Oo & Eaindra Kyaw Zin's Donation In Yangon
Myanmar Celebrity Couple, Pyay Ti Oo & Eaindra Kyaw Zin hostedahuge religious sermon donation event at Shwe Htut Tin Ground in Yangon on May 2, 2015. Cou...
ဗျာဒိတ်၊ ဖွားမြင်၊ ဗောဓိပင်၊ စံဝင်နန်းနိဗ္ဗာန် ဟူသောစကားအရ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် အရေးကြီးသည့် အမှုကိစ္စ လေးခု ဖြစ်သော ၁။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံ၌ ဗျာဒိတ...